ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင်၊ ကိုဗစ်-၁၉ ကပ်ရောဂါကြောင့် အလုပ်သမားများ၏ ကြုံတွေ့ ရသည့် အခက်အခဲများနှင့်ပတ်သက်၍ အစိုးရ၊ အလုပ်ရှင်၊ အလုပ်သမား သုံးပွင့်ဆိုင်ညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးတက်ရောက်၊ အကောင်းဆုံးအဖြေရှာ၍ နိုင်ငံတော်၏ ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတိုး တက်စေရေး ကြိုးပမ်းကြရန်တိုက်တွန်းမှာကြား။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ILO-ITC Myanmar မှ Video Conferencing စနစ်အသုံးပြု၍ ကျင်းပပြုလုပ်သည့် online e-campus စတင်မိတ်ဆက်ခြင်း အခမ်းအနား သို့ တက်ရောက်၍ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ အရာထမ်းများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေး နည်းပြသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ က အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားစဉ်
ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်များကို New Normal နှင့်အညီ ပိုမိုလျှင်မြန်ထိရောက်စွာ ရှာဖွေပေးနိုင် ရေးအတွက်ပြည်တွင်းအလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း၏အမှုဆောင်များ အေဂျင်စီများနှင့် ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြော ကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဘရာဇီးလ်ဖက်ဒရယ်သမ္မတနိုင်ငံ သံအမတ်ကြီး Mr. Carlos Paranhos အား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်
အထည် ချုပ် ကဏ္ဍအတွက် ကိုဗစ်-၁၉ အထောက်အပံ့အဖြစ် ဥရောပသမဂ္ဂ မြန်ကူ ထောက်ပံ့ကြေးငွေ အစီအစဉ်အပေါ် နှစ်ကုန်ပြန်လည်သုံးသပ်မှုနှင့်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းစဉ်များ ညှိနှိုင်း ရေးဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးက အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားစဉ်
အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမားဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၊ အရာထမ်းများ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် မြှင့်တင်ရေးနည်းပြသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ က အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံ လုပ်သားများ ကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေးအဖွဲ့ အမျိုးသားအဆင့် အလုပ်အကိုင်ဆိုင်ရာ ကျွမ်းကျင်မှုအသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ရရှိသည့် စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူ တစ်ဦးအား အသိအမှတ်ပြုလက်မှတ်ပေးအပ်စဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့နှင့် ILO တို့ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည့် သတင်းအချက်အလက်စီမံခန့်ခွဲမှုစနစ်နှင့် e-Services လုပ်ငန်းများ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
လူမှုဖူလုံရေးစီမံကိန်း လူသားအရင်းအမြစ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးဆိုင်ရာ နည်းပြမွမ်းမံသင်တန်း ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေမှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားစဉ်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံ ရေးဦးစီးဌာနရှိ အရာထမ်းများ၏ အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုဖြေရှင်းရေးဥပဒေနှင့် လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မြှင့်တင်ရေးသင်တန်း ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာ စကားပြောကြားစဉ်
မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဌာန်းရေးအဖွဲ့ NSSA Web Portal ဒုတိယအဆင့် လုပ်ငန်းစဉ် ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
နိုင်ငံတကာလုပ်သားများရွှေ့ပြောင်းခြင်းစီမံခန့်ခွဲမှုဆိုင်ရာ အမျိုးသားအဆင့် ဒုတိယ (၅) နှစ်တာ လုပ်ငန်းစီမံချက် (၂၀၁၈-၂၀၂၂) ၏ ကာလတစ်ဝက်အပေါ် အကောင်အထည်ဖော်နိုင်ရေးနှင့် လေ့လာစောင့်ကြည့်သုံးသပ်ခြင်းဆိုင်ရာအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ က Video Clip ဖြင့် အဖွင့်အမှာစကား ပြောကြားစဉ်
စစ်ဆေးအကဲဖြတ်သူများအဖြစ်အတည်ပြုခန့်ထားနိုင်ရေးအတွက်ပို့ချသော Assessor Methodology Online Training (10th Batch) ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E.Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား Video Conferencing စနစ် အသုံးပြု၍ နှစ်နိုင်ငံအလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးစဉ်
Video Conferencing ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၁/၂၀၂၀) ကြိမ်အမြောက် အမျိုးသားအဆင့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ Video Conferencing စနစ်အသုံးပြု၍ မြန်မာနိုင်ငံ၏ စဉ်ဆက်မပြတ်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု မြှင့်တင်နိုင်ရေးနှင့် အထည်ချုပ်ကဏ္ဍကျွမ်းကျင်မှုမြှင့်တင်နိုင်ရေး တို့အတွက် EUROCHAM MYANMAR မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့့်် တွေ့ဆုံ၍ ဆွေးနွေးစဉ်
Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ၂၆ ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအလုပ်သမား ဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး နှင့် ၁၁ ကြိမ် မြောက် အာဆီယံ+၃ အလုပ်သမားဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ တက်ရောက်ဆွေးနွေးစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ Video Conference စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Covid-19ကပ် ရောဂါကာလအတွင်း စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ လူမှုဖူလုံရေး အကျုံးဝင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်းဌာနများရှိ အလုပ်သမားများ၊ ဝန်ထမ်းများအား လူမှုဖူလုံရေး ထောက်ပံ့ငွေများဆက်လက်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနေသည့်အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့တက်ရောက်စဉ်
(၂၆) ကြိမ်မြောက် အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေး (26th ALLM) နှင့်ပတ်သက်၍ အကြိုညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ တက်ရောက်စဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ Video Conference စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် Covid-19ကပ် ရောဂါကာလအတွင်း စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများ ဖွင့်လှစ်ဆောင်ရွက်နေမှု အခြေအနေများ၊ လူမှုဖူလုံရေး အကျုံးဝင် စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ လုပ်ငန်းဌာနများရှိ အလုပ်သမားများ၊ ဝန်ထမ်းများအား လူမှုဖူလုံရေး ထောက်ပံ့ငွေများဆက်လက်ခွင့်ပြုထုတ်ပေးနေသည့်အခြေအနေများနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမား အဖွဲ့အစည်းများနှင့်ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲတွင် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ Video Conference စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် အလုပ် သမားအဖွဲ့အစည်းများမှ ကိုယ်စားလှယ်များ၊ မြန်မာနိုင်ငံကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်း ရှင်များအဖွဲ့ချုပ်တို့မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ Virtual Meeting ဖြင့် ကျင်းပသည့် (၁၃) ကြိမ်မြောက် ရွှေ့ပြောင်းအလုပ်သမားဆိုင်ရာ အာဆီယံဖိုရမ်အတွက် နိုင်ငံအဆင့်သုံးပွင့်ဆိုင် အကြိုလုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေး ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်မှ တာဝန်ရှိသူများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေသည် VIDEO CONFERENCE စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် COVID-19 ကပ်ရောဂါ အခြေအနေကြောင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းယာယီပိတ်သိမ်းမည့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံများမှ အလုပ်သမားများအားပိတ်ရက်ကာလအတွက် လုပ်ခ၊လစာထောက်ပံ့ပေး နိုင်ရေးနှင့်ပတ်သက်၍ UMFCCI မှ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှင့် ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် VIDEO CONFERENCE စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ပြောင်းလဲလာသော အလုပ်အကိုင်လောကအတွက် လူ့စွမ်းအားအရင်းအမြစ် ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေး ဆိုင်ရာ အာဆီယံဝန်ကြီးများအဆင့် ညီလာခံသို့ တက်ရောက်ဆွေးနွေးစဉ်
Video Conferencing စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၁၇) ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားအဆင့် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ အလုပ်သမားရေးရာဆက်ဆံရေးဦးစီးဌာန၏ COVID-19 ကာ လအတွင်း အလုပ်သမားရေးရာအငြင်းပွားမှုများအားဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မှုများနှင့် ရှေ့ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ်များ ရှင်းလင်းတင်ပြခြင်း အခမ်းအနားတွင် အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ Safe and Fair Project ၏ အမျိုးသားအကြံပေး ကော်မတီ အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ မှ COVID-19 ကာလအတွင်း ဖြေလျော့ဆောင်ရွက်နေမှုများနှင့် ရှေ့ဆက်လက် ဆောင်ရွက်ရမည့်အစီအစဉ်များအားရှင်းလင်းတင်ပြသည့်အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ အလုပ်သမားအဖွဲ့ချုပ်များမှ ကိုယ်စားလှယ်များနှင့်တွေ့ဆုံသည့် အခမ်းအနားတွင် အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ လုပ်ငန်းခွင်ဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းရေးနှင့်ကျန်းမာရေးဆိုင်ရာ နည်းဥပဒေပြဋ္ဌာန်းရေးဆွဲညှိနှိုင်းရေး အစည်းအဝေးသို့ တက်ရောက်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မှ ပြည်တွင်း/ပြည်ပ သင်တန်းများ၌ ထူးချွန်စွာ အောင်မြင်ခဲ့သည့် ဝန်ထမ်းတစ်ဦးအား ဂုဏ်ပြုဆုပေးအပ်ချီးမြှင့်စဉ်
အလုပ်သမား၊လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန အလုပ်ရုံနှင့်အလုပ်သမား ဥပဒေစစ်ဆေးရေးဦးစီးဌာန၏ အမှုထမ်းများ လုပ်ငန်းခွင်အကြိုသင်တန်းဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ တက်ရောက်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
Video Conference စနစ်ဖြင့် ကျင်းပပြုလုပ်သည့် ILO Convention -138 (အငယ်ဆုံးအသက်ပြဋ္ဌာန်းချက်) ဆိုင်ရာဆွေးနွေးပွဲတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ COVID-19 ကာလအတွင်း New Normal ပုံစံ ကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ စနစ်တကျပြန်လည်ဖွင့်လှစ် နိုင်ရေးသင်တန်းကျောင်းတာဝန်ခံများနှင့်တွေ့ဆုံဆွေးနွေးပွဲတွင်အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်။
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင် ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်
အမျိုးသားအဆင့် အဓမ္မခိုင်းစေမှုဆိုင်ရာတိုင်ကြားမှုယန္တရား အကောင်အထည်ဖော်ရေး အမျိုးသား ကော်မတီ၏ ပထမအကြိမ်ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မှ အဖွင့် အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ILO_Virtual_Global_Summit_on_COVID-19_and_the_world_of_work_Constituents’_Day အခမ်းအနားသို့ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ Video Conferencing စနစ်ဖြင့် ပါဝင်တက်ရောက်
Video Conferencing စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် (၁၆) ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားအဆင့် သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲ အခမ်းနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာနိုင်ငံလုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု “စံ” သတ်မှတ်ပြဋ္ဌာန်းရေး အဖွဲ့(NSSA) မှ NSSA Web Portal စတင်စမ်းသပ်ထုတ်လွှင့်နေမှုအခြေအနေအား ရှင်းလင်းတင်ပြ သည့် အစည်းအဝေးတွင် NSSA Web Portal နှင့်ပတ်သက်၍ လိုအပ်ချက်များအားဖြည့်စွက်မှာကြားစဉ်
အလုပ်သမား၊ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့်ပြည်သူ့အင်အားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ကိုရီးယားနိုင်ငံသံအမတ်ကြီးဖြစ်သူ H.E.Mr. Lee Sang-hwa ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား Video Conferencing စနစ် အသုံးပြု၍ အလုပ်သမားရေးရာ ကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍ ဆွေးနွေးစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် UNICEF MYANMAR မှ မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနေ ကိုယ်စားလှယ်ဖြစ်သူ Ms. June Kunugi ဦးဆောင်သောအဖွဲ့အား Digital Meeting စနစ်ဖြင့် လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ သည် VIDEO CONFERENCE စနစ်ဖြင့်ကျင်းပပြုလုပ်သည့် “အလုပ်သမားနှင့် အလုပ်အကိုင်အပေါ် Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ရောဂါ သက်ရောက်မှုများကိုတုန့်ပြန်ရန် အာဆီယံအလုပ်သမားဝန်ကြီးများအဆင့်အထူးအစည်းအဝေး” သို့ ပါဝင်တက်ရောက်ဆွေးနွေးစဉ်
Coronavirus Disease 2019 (COVID -19) နှင့်စပ်လျဉ်း၍ စက်ရုံ၊ အလုပ်ရုံ၊ အလုပ်ဌာနများ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အသိပေးထုတ်ပြန်ကြေညာခြင်
COVID-19 ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် ဖြစ်ပေါ်သက်ရောက်နေသည့် အခက်အခဲ အကြပ်အတည်းများ အပေါ် ဖြေရှင်းဆောင်ရွက်မည့် နည်းလမ်းများကို ဆွေးနွေးအဖြေရှာနိုင်ရေးအတွက် သုံးပွင့်ဆိုင် အစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ လူ့စွမ်းအားဖွံ့ဖြိုးမှုအညွှန်းကိန်းများအသုံးပြုသူများ၏ အလုပ်ရုံ ဆွေးနွေးပွဲ ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်
အနည်းဆုံးအခကြေးငွေသတ်မှတ်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးပွဲ တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
လတ်တလောဖြစ်ပေါ်နေသော COVID-19 ရိုက်ခတ်မှုကြောင့် စက်ရုံ/အလုပ်ရုံ များတွင် ဖြစ်ပေါ် လာနိုင်သည့် အခက်အခဲပြဿနာများနှင့်စပ်လျဉ်း၍ ဝန်ကြီးဌာနမှ ကြိုတင် ပြင်ဆင်ဆောင်ရွက် ထားရှိမှု အခြေအနေများနှင့် ပတ်သက်သည့် ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ၊	2019 Novel Coronavirus (2019 n-CoV) ကြောင့် ဖြစ်ပွား သောအဆုတ်ရောင်ရောဂါနှင့်ပတ်သက်၍ အလုပ်သမားများအတွက် ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရေး ဆိုင်ရာညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် အဖွင့်အမှာပြောကြားစဉ်
အလုပ်သမားရေးရာပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးလုပ်ငန်းကော်မတီညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၊ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဆောင်သောအဖွဲ့နှင့် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ အလုပ်သမားရေးရာအဖွဲ့ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Greg Vines ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့တို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်
(၁၅) ကြိမ်မြောက် အမျိုးသားအဆင့်သုံးပွင့်ဆိုင်ဆွေးနွေးပွဲအခမ်းနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးမှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများ က သင်တန်းကျောင်းအတွင်း၌ အာဆီယံကျွမ်းကျင်မှု ပြိုင်ပွဲတွင် လေအေးပေးစက်တပ်ဆင်မှုပြိုင်ပွဲဝင်ရန် လေ့ကျင့်နေသည့် လူငယ်များအား ကြည့်ရှု့ အားပေးစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံသို့ မြန်မာနိုင်ငံမှ အလုပ်သမားများ စေလွှတ်နိုင်ရေး အတွက် မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာ ဂျပန်နိုင်ငံသံအမတ်ကြီး H.E. Mr. MARUYAMA Ichiro နှင့် အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်
မီဒီယာနှင့် ရွှေ့ပြောင်းသွားလာလုပ်ကိုင်ခြင်းဆိုင်ရာအလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲအခမ်းအနားတွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ၊ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ အအိချိခရိုင် နာဂိုယာမြို့မှ မြန်မာဂုဏ်ထူးဆောင် ကောင်စစ်ဝန် Mr. Toshio Nishimura ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး ဒဂုံမြို့သစ် (မြောက်ပိုင်း) မြို့နယ်ရှိ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန၊ လုပ်သားများကျွမ်းကျင်မှု လေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်းသို့ သွားရောက်ကြည့်ရှု့စစ်ဆေးစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ နှင့် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးဝန်ကြီးချုပ် ဦးဖြိုးမင်းသိန်း တို့ အလုပ်ရှင်/အလုပ်သမားရေးရာကိစ္စရပ်များနှင့်ပတ်သက်၍တွေ့ဆုံဆွေးနွေးစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ အလုပ်သင်အလုပ်သမားစေလွှတ်ရေးနှင့် သက်ကြီးရွယ်အို စောင့်ရှောက်ရေးအတွက် အလုပ်သမား များစေလွှတ်နိုင်ရေးကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍ ဂျပန်နိုင်ငံ၊ ချိဘခရိုင်အစိုးရအဖွဲ့မှ Assistant Director General ဖြစ်သူ Mr. EGUCHI Yo ဦးဆောင်သော ကိုယ်စားလှယ်အဖွဲ့အား လက်ခံတွေ့ဆုံ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုဇုန်များနှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအသင်း ဥက္ကဌ ဦးကိုကြီး နှင့် အဖွဲ့ဝင်များအား လက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ မြန်မာနိုင်ငံစက်မှုကုန်ထုတ်လုပ်သူများအသင်း၏ ဥက္ကဌ ဒေါက်တာအောင်သိန်း နှင့် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင်များအားလက်ခံတွေ့ဆုံစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့်တာဝန်ရှိသူများမှမြန်မာကျွမ်းကျင်မှုပြိုင်ပွဲ (၂၀၂၀)ဖွင့်ပွဲအခမ်းအနားတွင် အဲယားကွန်းအလုပ်အကိုင်ပြိုင်ပွဲ ကျင်းပမည့်နေရာများအားလိုက်လံကြည့်ရှုစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ နိုင်ငံခြားသားအမြဲနေထိုင်ခွင့်လျှောက်ထားသူများအနက် ဗဟို ကော်မတီမှ စိစစ်အတည်ပြုပြီးသူများအား လူတွေ့မေးမြန်းအကဲဖြတ်၍ အမြဲနေထိုင်ရန် ခွင့်ပြုသင့်/ မပြုသင့် ဝိုင်းဝန်းအကဲဖြတ်ဆွေးနွေးပေးကြရန်မှာကြား
မသန်စွမ်းသူများ၏ အခွင့်အရေးများဆိုင်ရာ အလုပ်အကိုင်ရေးရာဆပ်ကော်မတီဥက္ကဌ အလုပ်သမားညွှန်ကြားရေးဦးစီးဌာန ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းရှိန်မှ ဌာနဆိုင်ရာများ၊ စက်မှုဇုန်စီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီဥက္ကဌ၊ အတွင်းရေးမှူးများ၊ အလုပ်ရှင်များနှင့် မသန်စွမ်းအသင်းအဖွဲ့များ ညှိနှိုင်းဆွေးနွေးပွဲ၌ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ e-ID စနစ်အတွက် လုပ်ငန်းသဘောတူစာချုပ် (မူကြမ်း) အား ဖွံ့ဖြိုးမှုအကူအညီဆိုင်ရာ မူဝါဒပြဋ္ဌာန်းချက်များနှင့်အညီ ဆောင်ရွက်နိုင်ရေး အကြံပြုဆွေးနွေး ညှိနှိုင်းပြင်ဆင်ပေးကြရန် တိုက်တွန်း။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ မိုးကုတ်မြို့၌ လီဆူးစာပေနှင့်ယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင်များ၊ နီပေါလ်(ဂေါ်ရခါး)၊ ခိုလုံလီရှော၊ ကိုးကန့်နှင့် မုန်းဝန်းယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့ဝင်များအား တွေ့ဆုံ၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနှင့် မြန်မာပြည်ပအလုပ်အကိုင်ဝန်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအဖွဲ့ချုပ်တို့ တွေ့ဆုံဆွေးနွေး
(၆၄) နှစ်မြောက် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ နှစ်ပတ်လည်နေ့ အခမ်းအနားကျင်းပ
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ၊ လူဦးရေခန့်မှန်းခြင်း (၁၉၈၃-၂၀၁၄) သုတေသန အစီရင်ခံစာ ထုတ်ပြန်ခြင်းအခမ်းအနားသို့ တက်ရောက်၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ ဩစတြီးယားနိုင်ငံ OeSD မှ Senior Government Program Manager, Mr. FAUL Wilhelm Martin နှင့်အဖွဲ့အားလက်ခံတွေ့ဆုံ ၊
(၁/၂၀၁၉) ကြိမ်အမြောက် အမျိုးသားအဆင့် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့ အစည်းအဝေး တွင် ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး မှ အဖွင့်အမှာစကားပြောကြားစဉ်
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ အိန္ဒိယနိုင်ငံ ၊ UIDAI ရုံးချုပ်မှ ဒုတိယညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် Mr. Yarram Lakshmi Prasada Rao နှင့်အဖွဲ့အား နေပြည်တော်၌ လက်ခံတွေ့ဆုံ၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ တိုင်းဒေသကြီး/ ပြည်နယ်အသီးသီးရှိ လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးနှင့် ပြည်သူ့အင်အားဆိုင်ရာ လုပ်ငန်းများတွင် တာဝန်ယူဆောင်ရွက်နေသည့်ဝန်ကြီးများအား လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ချက်များရှင်းလင်းခြင်း အခမ်းအနားတက်ရောက်၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း နည်းပြ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၄) ဖွင့်ပွဲတက်ရောက်၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ နိုင်ငံခြားသား အမြဲနေထိုင်ခွင့်ပြုခြင်းဆိုင်ရာ အကောင်အထည် ဖော်ရေးဗဟိုကော်မတီ လုပ်ငန်းညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးတက်ရောက်၊
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ ၊ ၂၀၁၉ ခုနှစ်၊ ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင်စာရင်း နည်းပြ သင်တန်း အမှတ်စဉ်(၃) ဖွင့်ပွဲတက်ရောက်၊ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက် အရေးပါသည့် လုပ်ငန်းစဉ်၌ တစ်တပ်တစ်အားပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်နေကြောင်းပြောကြား။
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးဦးသိန်းဆွေ ၊ ပျဉ်းမနားမြို့နယ်အတွင်း ကြားဖြတ်လူဦးရေသန်းခေါင် စာရင်း ကွင်းဆင်းကောက်ယူနေမှုကြည့်ရှု၊ မေးခွန်းများအား မှန်ကန်စွာဖြေကြားခြင်းဖြင့် နိုင်ငံတော်အတွက် အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတာဝန်ကို တစ်တပ်တစ်အား ဝိုင်းဝန်းကူညီထမ်းဆောင် ရာရောက်ကြောင်း ရှင်းလင်းပြောကြား
ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးသိန်းဆွေ၊ ကင်ညာနိုင်ငံ၊ နိုင်ရိုဘီမြို့၌ကျင်းပသည့် (၂၅) နှစ်မြောက် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာလူဦးရေနှင့် ဖွံ့ဖြိုးမှုညီလာခံ-ICPD25 သို့တက်ရောက်၊
(အလုပ်သမားရေးရာဆိုင်ရာ) ဝန်ထမ်းမိသားစုများ၏ (၁၃)ကြိမ်မြောက် စုပေါင်းမဟာဘုံကထိန် အလှူတော်မင်္ဂလာ အခမ်းအနားကျင်းပ
အလုပ်ခန့်ထားမှုဆိုင်ရာ သဘောတူစာချုပ် ချုပ်ဆိုကြရန် အသိပေးကြေညာချက်
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးရှိ ခုံသမာဓိအဖွဲ့၊ မြို့နယ်ညှိနှိုင်းဖျန်ဖြေရေးအဖွဲ့ အဖွဲ့ဝင်များနှင့် အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင် တွေ့ဆုံ
ရန်ကုန် ဇန်နဝါရီ ၂၄ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ဒုတိယဝန်ကြီး၊ ဦးဝင်းရှိန်သည် ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ အလုပ်သမားရေးရာဦးစီးဌာန၊ အဖွဲ့များမှ ဝန်ထမ်းများကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် ရန်ကုန်မြို့၊ ဒဂုံ မြို့သစ်မြောက်ပိုင်း မြို့နယ်ရှိ ကျွမ်းကျင်မှုလေ့ကျင့်ရေးသင်တန်းကျောင်း၊ ပင်လုံခန်းမ၌ တွေ့ဆုံ သည်။ တွေ့ဆုံစဉ် ဒုတိယဝန်ကြီးက ဝန်ထမ်းများသည်...
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၂၁ ပြည်ပတွင် အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ၏ ၁/၂၀၂၂ ကြိမ်မြောက် လုပ်ငန်း ညှိနှိုင်းအစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက် ၁၀:၀၀ နာရီတွင် အလုပ်သမား ဝန်ကြီးဌာန၊ အစည်းအဝေး ခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။ အစည်းအဝေးသို့ ပြည်ပတွင်အလုပ်လုပ်ကိုင်မှုကြီးကြပ်ရေးကော်မတီ ဥက္ကဋ္ဌ၊ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန၊ ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီး ဦးမြင့်ကြိုင် ၊...
နေပြည်တော် ဇန်နဝါရီ ၁၃ ရက် မြန်မာနိုင်ငံ ကလေးအလုပ်သမား ပပျောက်ရေးဆိုင်ရာ အမျိုးသားကော်မတီ၏ အတွင်းရေးမှူးအဖွဲ့ စတုတ္ထအကြိမ် လုပ်ငန်းညှိနှိုင်း အစည်းအဝေးကို ယနေ့နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော်ရှိ အလုပ်သမားဝန်ကြီးဌာန အစည်းအဝေးခန်းမ၌ ကျင်းပသည်။
လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၂၀၂၂-၂၀၂၃ ဘဏ္ဍာနှစ်အတွက် စာချုပ်ဆေးဆိုင်တင်ဒါခေါ်ယူမည်ဖြစ်၍ စိတ်ပါဝင်စားသော ပြည်ထောင်စု မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းရင်းသား လုပ်ငန်းရှင်များအား အိတ်ဖွင့် တင်ဒါ ခေါ်ယူအပ်ပါသည်
၂၀၂၂ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏ ၁/၂၀၂၂ လတွင် Provider Purchaser Split စာချုပ်ဆေးခန်းများ၌ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် အာမခံအလုပ် သမားများ (Enrolled) စာရင်း ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်မည့် စာချုပ်ဆေးခန်းများနှင့် အာမခံအလုပ်သမားဦးရေ Enrolled စာရင်း (၁/၂၀၂၂) ၂၀၂၁ ခုနှစ် လူမှုဖူလုံရေးအဖွဲ့၏...
အာမခံအလုပ်သမားများ၏ မီးဖွားမှုဆိုင်ရာ ဝန်ဆောင်မှု (၅) မျိုး ဆေးဖိုးပြန်အမ်းခြင်းအတွက် သတ်မှတ်ခွင့်ပြုခြင်း ညွှန်ကြားချက် အမှတ် (၇/၂၀၂၁) ...